စက်မှုမြို့က အစားအစာ စုံလင်လှတဲ့ ဆိုင်လေး | The Restaurant Guides for Myanmar
စက်မှုမြို့တော်က အစားအစာ စုံလင်လှတဲ့ ဆိုင်လေး
ဒီဆိုင်လေးက ကဖေးနှင့် စားဖွယ်စုံဆိုင်လေးပါ..
ထူးခြားတာက .. ရေပန်းလေးတွေကို ဆိုင်ပတ်လည် အဝင်ဝနားမှားတပ်ဆင်ထားတော့ ဆိုင်ထဲကို ဝင်ရောက်တဲ့ သူတွေဆို အေးအေးချမ်းချမ်းလေးခံစားရမှာ..ကဖေးဆိုင်ဆိုပေမဲ့လည်း ဆူညံမနေပဲ တေးသွားအေးအေးလေးတွေလည်း နားဆင်ခံစားနိုင်သေးတယ်..
နောက်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ကဖေးနှင့် စားဖွယ်ကို မနက်စာအတွက် ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ စားချင်တာတွေ တော်တော်များများရတဲ့ ဆိုင်..
..မနက်စာနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ မြန်မာအစားအစာတွေလား ?
..ချာပါတီ၊ ပူတီတွေပဲ စားမလား ? တော်တော်များများကို အစုံရတာနော် ..
ကိုယ်တိုင်ယူစနစ် ရေနွေကြမ်းဓါတ်ဗူးကြီးတွေလည်း ခုံတွေနဲ့ မလှမ်းမကမ်းနေရာတိုင်းမှာထားပေးထားတယ်..
.. ရေနွေကြမ်းဆိုပေမဲ့ သေချာကို ဂရုစိုက်လုပ်ပေးထားတာ .. Jasmine Tea၊ မိုးကုတ် လဖ္ဘက်ခြောက်တို့လို နာမည်ကြီးတွေနှင့် ရောစပ်ပေးထားတာ .. ရှာလည်သွားမှာနော်..
မနက်စာဆိုပေမဲ့လည်း ၆ နာရီကနေ ည ၁၂ ထိဆိုတော့ နေ့လည်စာ၊ ညစာသမားတွေလည်း စားလို့အဆင်ပြေတယ်နော်..
နောက်တစ်ခုက ကဖေးဆိုင်ဆိုပေမဲ့ အထင်တော့ မသေးနဲ့အုံး .. အပေါ်ထပ်မှာ ဆိုရင် ခေတ်မှီ အစားအစာ စားချင်သူတွေအတွက် ဟော့ပေါ့ သီးသန့်ရောင်းပေးတယ်နော်.. ခုချိန်မှာ ဟော့ပေါ့ ဆိုတာ လူငယ်လူကြီး အကြိုက်များနေတဲ့ အစားအစာပဲ ..
ဈေးနှုန်းကလည်း ပင်လယ်စာနဲ့မှ ၆၅၀၀ လောက်ပဲ ကျမှာ ..
ကျန်သေးတယ် ညနေဘက်ဆိုရင် ကိုကိုတွေအတွက်လည်း အမောပြေ သောက်စရာလေးတွေကလည်း အစုံအလင်ရှိတယ်နော်..
..အင်္ဂလိပ်စာသင်ချင်ရင်လည်း ရတယ် (ABC)
..သင်္ကြန်အကြို ကဲမယ်ဆို (Tuborg)
..Dagon Premium ..... ဒီလိုမျိုးစည်ဘီယာအစုံကို ဂေါ့ဖ် (Golf) နဲ့ သောက်လို့ရတယ်..ပုလင်းတွေလည်းရသေးတယ်နော်.. Alcohol တော့ ဒီဆိုင်မှာမရပါဘူး..
နောက်ထပ်ဒီဆိုင်က ထူးခြားချက်တစ်ခုက ဆိုင်ဖွင့်တာ ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း ဆိုင်ခွဲပေါင်း (၆) ဆိုင်ကျော်တောင်ဖွင့်နေနိုင်ပြီ.. ဒီအတွက် ဒီဆိုင်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဈေးနှုန်းချိုသာမှု၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုတွေကတော့ ထွေးထူးတော့ မပြောတော့ဘူးနော်..
ဆိုင်က လှိုင်သာယာ စက်မှုမြို့မှာ ရှိတာဆိုတော့ မြို့ထဲက ဆိုင်တွေလောက်အရမ်းကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ သူတို့နီးနီးဖြစ်ပြီး သူဒေသ ဒီနေရာမှာ ဆိုရင်တော့ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမဲ့ ဆိုင်ပဲ..ဆိုင်ဖွင့်ချိန်က မနက် ၆နာရီကနေ ည ၁၂ အထိဖွင့်ပါတယ်..
ဒီတော့ လှိုင်သာယာကို အလုပ်တာဝန်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. ခရီးတစ်ထောက်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကို အလည်ဝင်ရောက်စေချင်ပါတယ်..
• ရွှေကျွန်းမြေ အဆင့်မြင့် ကဖေး နှင့် စားဖွယ်စုံ
အမှတ် ( ၁၆၉ )၊ ၈-ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်းနှင့် မန္တလေးလမ်းထောင့်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၀၉ ၂၅၈ ၁၁၈ ၈၈၇၊ ၀၉ ၇၆၅ ၄၁၃ ၇၅၅ ၊ ၀၉ ၇၈၇ ၉၇၉ ၇၁၉
• ရွှေမေတ္တာ (၁)
အမှတ် ( ၁၂၆၂/A ) ၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီး၊ ၁၀၃-မှတ်တိုင်နှင့် ကမ္ဘောဇမှတ်တိုင်ကြား၊(ပညာမျိုးဆက်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းရှေ့
၀၉ ၂၅၈ ၁၁၈ ၈၈၇
• ရွှေမေတ္တာ (၃)
အမှတ် ( ၁၂၃၅/က )၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးနှင့် သူရီယလမ်းထောင့်၊ ၁၂၇-ဂိတ်ဟောင်းအနီး၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၀၉ ၆၉၅ ၄၁၃ ၇၅၅
အမှတ် ( ၃၁၉ )၊ ( ၃၂၀ )၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီး၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။
၀၁၆၄၅ ၄၀၀၊ ၀၉ ၅၄၁ ၃၇၅ ၅
တောင်ငူလမ်းနှင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းထောင့်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၀၉ ၇၂၄ ၈၅၇ ၆၇၇
• ရွှေနံ့သာ (၂)
ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အ.ထ.က (၄) ကျောင်းအနီး၊ ရွှေလင်ဗန်းတံတားအဆင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။
၀၉ ၈၈၄ ၅၀၂ ၃၈၈
.. ရွှေမေတ္တာ ဆိုင်ခွဲတွေမှာတော့ ဟော့ပေါ့ (Hotpot) မရရှိပါ..